inkukhu yokutyisa i-pellet yokutya kukutya kwenkukhu,umatshini wepelletizer uyathengiswa
Kuyacetyiswa ukuba uthenge inkukhu ukutya okusela kwimingxunya yokuguqula inkunkuma yezolimo okanye iintsalela zokhuni zibe ziipellethi zokhuni ukuze kufudumezwe kwaye kuphekwe okanye uzenzele iipellets zakho zezilwanyana, ukuba unenqwaba yeentsalela zeenkuni; okanye unefama enkulu kwaye unenkunkuma eninzi yezolimo onokuyilahla; okanye ungumlimi ofuya izilwanyana, njengenkukhu, amadada, igusha, iinkomo okanye iihagu, njl,Le mveliso yeenkukhu yondla ipellet kukukodwa kuyilo olukhethekileyo lokupheka kweenkukhu ngombhobho wokufa ofayo kunye nabagibeli besitali. Uncedo lolu loyilo kukusetyenziswa kombane okuphantsi kwaye kusebenza ngokufanelekileyo ekwenzeni iipellets zokutya. Le mithi inkukhu iphathwayo inokulungisa umbona, iimbotyi zeembotyi, umququ, ingca kunye nerayisi yehagu yipalethi ezenziwe ngegriza. Ubeka nje i-feed ye-pellet yenkukhu kumhlaba omdaka kwaye emva koko ubeke imveliso yokutya emlonyeni okondlayo, emva koko izinto ziya kuphindezelwa kumngxunya wokufa ngumbambano phakathi komdaka ofayo kunye nabaqengqayo. Ngokwesiqhelo umsantsa ophakathi kokufa kunye nabaqengqelekayo yi-0,0-0.3mm yokwenza iipellets zokutya. Ubude be-pellet yokutya bunokulungiswa ngommese wokusika. Unokutshintsha ngokufa kwefulethi ukwenza iipellets zokutyisa nge diameter ezahlukeneyo zemingxunya yokufa. Emva kokuba i-pellet die isetyenziselwe ixesha elithile, unokuyijika i-oveni kwaye uqhubeke nokusebenza.
Ukufakwa kwesicelo seNkukhu yePellet Mill
Lo matshini wokupheka weenkukhu unokusetyenziswa ukwenza i-pellets zokutya, i-pellets yamafutha kunye neebhedi ezilala ekhaya ezilwanyana, kwifama okanye kwizityalo ezincinci zepellet. Njengoko umfanekiso ubonisa, Iipellets zeoyile zingasetyenziselwa ukupheka ekhaya kunye nobushushu; iipellets zokutya zezokutya izilwanyana.
Izinto zokuqala: Utyani, nazi, alfalfa, nezinye izinto zokutya (inqunyulwe)
Ukusetyenziswa: Njengokutya kwezilwanyana, izilwanyana
Umxube: kuxutywe ngokuthe ngqo (Umxholo wokufuma:12-15%)
Izinto zokuqala: Umgquba, ingca / hay (inqunyulwe)
Umxube: phantse ngokulingana (Umxholo ogcweleyo wokufuma: 12-15%)
Yintoni omele uyenze ngaphambi kokuQalisa ukuTya ngeNkukhu iPellet Mill?
1. Beka umatshini wokutya wepellet yenkukhu kwindawo ekhuselekileyo neyomileyo.
2. Sukusebenza kwimitha ye-pellet kwiqondo lokushisa elingezantsi 10 degree celsius.
3. Qinisekisa ukuba zonke ii-bolts kunye namantongomane aqiniswe ngokukhuselekileyo ngaphambi kokusebenza.
B. Vavanya abaleke
Ngaphambi kokuqala ukuvelisa iipellets, Kubalulekile ukuprinta ukufa ukuze kwenziwe ukuba kugude. Ukwenza oku, Kuya kufuneka ulungiselele umgubo oyi-5kg, 5kg isanti entle kunye 1.5 iilitha zeoyile yemifuno, uze udibanise izithako kwibhakethi. Okulandelayo, qala umatshini wepellet, kwaye emva koko faka inani elifanelekileyo lezinto ezixubileyo kwi-pellet feed ye-pellet kwaye uziyeke zibaleke kwimingxunya yokufa. Kuya kufuneka uyenze rhoqo le nto 40-60 imizuzu.
C. Phambi kokuba ubaleke kuqala, yamkela igrisi yokuthambisa zonke iibheringi. Umqhubi kufuneka enze kanye oku ngokuqeshisa 10 iiyure.
D. Misela uxinzelelo lwamavili ajikelezayo. Ukwenza oku, tsala nje ukufa kwaye ufumanise ukuba inokujikeleza phantsi kweeroli. Umsantsa phakathi kweetroli kunye nokufa kufuneka ulawulwe ngaphakathi kwe-0-0-0.3mm.